Celebrity Corner - Page2of 115 - CC
သူ့ကိုနောက်ကွယ်မှာအပုတ်ချနေတဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့အရှုပ်တော်ပုံတွေကို သက်သေနဲ့တကွပြသလာခဲ့တဲ့ နေဒွေး
Celebrity Corner | 19/05/2022
သူ့ကိုနောက်ကွယ်မှာအပုတ်ချနေတဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့အရှုပ်တော်ပုံတွေကို သက်သေနဲ့တကွပြသလာခဲ့တဲ့ နေဒွေး ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသာ နေဒွေးကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ် ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါ တယ်.။ နေဒွေးက အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ် ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် သာမာန်လူလိုပဲ မထင်မရှားနေထိုင်တတ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့အချစ်ရေးအကြောင်းကိုလည်း ပွင့်လင်းစွာ ချပြတတ်သူပါ.။ လက်ရှိမှာတော့ နေဒွေးက သူ့ရဲ့ချစ်သူ ကောင်မလေးရဲ့ သူ့အပေါ်မှာ
လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ အားတင်းပြီး ကြိုးစားရုန်းကန်နေတဲ့အကြောင်းကို ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ မူးလာ…
လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ အားတင်းပြီး ကြိုးစားရုန်းကန်နေတဲ့အကြောင်းကို ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ မူးလာ… Myanmar Idol သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယျဉ်ပြိုင်ရင်း တစ်စတစ်စနာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့ မူးလာ ကိုတော့ ပရိသတ်တိုင်း မှတ်မိကြအုန်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့ အသံပါဝါကောင်းကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ ရော့ခ်သီချင်းတွေ သီဆိုရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် ချစ်ခင်အားပေးမူ့ကို ရရှိထားပါတယ်။ မူးလာ ဟာ
တစ်ချိန်က NO အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် ရတနာ ကို မှတ်မှတ်ရရ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ညီနန္ဒ
တစ်ချိန်က NO အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် ရတနာ ကို မှတ်မှတ်ရရ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ညီနန္ဒ တစ်ခေတ်တစ်ခါက သီချင်းကောင်းများစွာကို သီဆိုခဲ့တဲ့ ပရိသတ်အသည်းစွဲ အဆိုတော်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ No အဖွဲ့ကိုတော့ အားလုံးပဲ မှတ်မိကြအုန်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ခပ်ချောချောအဖွဲ့ဝင် ကောင်မလေးသုံးယောက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကြားမှာ အတော်လေးအောင်မြင်မူ့ရခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သဇင်၊ရတနာ၊ရည်မွန် တို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ No
အဆိုနဲ့အကပဲ ကျွမ်းတယ်ထင်နေတဲ့လူတွေ အံ့အားသင့်သွားစေမယ့် ရေကြည်ချမ်းမြရဲ့ သရုပ်ဆောင် စကေး..
အဆိုနဲ့အကပဲ ကျွမ်းတယ်ထင်နေတဲ့လူတွေ အံ့အားသင့်သွားစေမယ့် ရေကြည်ချမ်းမြရဲ့ သရုပ်ဆောင် စကေး.. ပရဟိတအလုပ်တွေကြိုးစားရင်းနဲ့ပရိသတ်တွေချစ်နေရတဲ့မင်းသားကတော့ သရုပ်ဆောင်ဝေဋ္ဌုကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့တစ်ချိန်ကနိုင်ငံကျော်မင်းသားတစ်ယောက်ြ ဖစ်ပေမယ့် အောင်မြင်မှုတွေစွန့်ကာ ပရဟိတတွေကိုကြိုးစားနေတာပါ။ ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့နေရာတွေအထိကိုယ်တိုင် လှုဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်နေတာပါ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ပရဟိတမင်းသားကြီးဟာ ပျော်ရွှင်စရာအိမ်ထောင်ရေးလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ အိမ်ထောင်ရေးလေးကိုလည်းပျော်ရွှင်အောင်ဖန်တီးရင်း ပရဟိတအလုပ်တွေလည်းကြိုးစားနေတာပါ။ ဇနီးဖြစ်သူက လည်း အနုပညာရှင်ဖြစ်တာကြောင့်သူ့တို့အိမ်ထောင်ရေးလေးဟာနားလည် မှုတွေပြည့်နေတာပါ။ သူရဲ့ဇနီးလေးဟာခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပရိသတ်တွေပိုသိလာပြီး လူမှုကွန်ရက်မှာလည်းပုံရိပ်လေးတွေတင်ပေးလေ့ရှိတာပါ။ သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေ
ဒီနေ့မှာပဲ အသက် ၅၇ နှစ် ပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်အချစ်တော် အဆိုတော် လေးဖြူ
ဒီနေ့မှာပဲ အသက် ၅၇ နှစ် ပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်အချစ်တော် အဆိုတော် လေးဖြူ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းအဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်သလို အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ Rock သီချင်းတွေကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ သီဆိုလေ့ရှိတဲ့ အဆိုတော်လေးဖြူကိုတော့ အားလုံးပဲ သိကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။ ပရိတ်သတ်အချစ်တော် အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးစာရင်းဝင် Iron Cross အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်
ဂီတလောကမှ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အမှတ်တရတွေကို မျှဝေလိုက်တဲ့ အဆိုတော် R ဇာနည်
ဂီတလောကမှ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အမှတ်တရတွေကို မျှဝေလိုက်တဲ့ အဆိုတော် R ဇာနည် အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းကောင်းများစွာကို သီဆိုထားပြီး ပရိသတ်ပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူကတော့ ဝါရင့်အဆိုတော်ကြီး Rဇာနည် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ MRTV-4 ကထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့ The Voice Myanmar မှာ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ နီနီခင်ဇော်၊ကျားပေါက်၊ရန်ရန်ချမ်းတို့နဲ့အတူ ဒိုင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့
ဆံပင်စတိုင် အသစ်လေး ချိန်းလိုက်ပြီးနောက် ဆယ်ကျော်သက်လေးလို နုပျိုလှပနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ချပြလာတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
ဆံပင်စတိုင် အသစ်လေး ချိန်းလိုက်ပြီးနောက် ဆယ်ကျော်သက်လေးလို နုပျိုလှပနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ချပြလာတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည် ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့အကယ်ဒမီဆုနှစ်ဆုပိုင်ရှင်မင်းသမီးတစ်လက်ပါ။ သူမရဲ့ဇာတ်ကားတွေဟာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပိုလက်ရာမြောက်ကာ ထိပ်တန်းစာရင်းဝင်မင်းသမီးတစ်လက်လို့တောင်ဆိုရမှာပါ။ အမြဲရှင်းသန့်ကျော့ရှင်းကာ အရုပ်လေးတစ်ရုပ်လိုအမြဲလှပနေတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကို ချစ်ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးနဲ့ရွှေကစ်လို့လည်းခေါ်ကြပါသေးတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့”New Hair …. Who’s this? 💇🏻‍♀️”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အတူ ဆံပင်စတိုင်အသစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်လာခဲ့တာပါ။ အမြဲနုပျိုလှပကာ ဆယ်ကျော်သက်လေးတစ်ယောက်အလားထင်မှတ်ရတဲ့ရွှေကစ်ကတော့
မြန်မာ့ရုပ်ကြီးစင် အမြင့်သဘင်ခေတ် သဘာဝကျကျအလှပုံရိပ်လေးများနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ မင်းသားကြီး နေမျိုးအောင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ…
Celebrity Corner | 18/05/2022
မြန်မာ့ရုပ်ကြီးစင် အမြင့်သဘင်ခေတ် သဘာဝကျကျအလှပုံရိပ်လေးများနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ မင်းသားကြီး နေမျိုးအောင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ… ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် နေမျိုးအောင်နဲ့ အာဗြဲစိန်တို့ မိသားစုလေးကတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ပျော်ပျော်နေတတ်ကြပြီး ပရိတ်သတ်တွေ ချစ်ခင်ရတဲ့ မိသားစုလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဗြဲစိန်ကတော့ သူ့ရဲ့ဟင်းလက်ရာတွေကို ချက်ပြရင်း ပရိတ်သတ်တွေ အကြိုက် တွေ့ကာ သူ့ရဲ့ဟင်းချက်နည်းတွေကအောင်မြင်လာခဲ့တာပဲ ဖစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ တစ်ခြား
“ချစ်ဆေး”ဆိုတဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲလေးထဲမှာ တမူထူခြားတဲ့ကောင်မလေးတယောက်အဖြစ်မြင်တွေ့ရမယ့် သရုပ်ဆောင် မေတိုးခိုင်..
“ချစ်ဆေး”ဆိုတဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲလေးထဲမှာ ဖရိုဖရဲနေတတ်တဲ့ကျင့်စရိုက်လေးနဲ့ တမူထူခြားတဲ့ကောင်မလေးတယောက်အဖြစ်မြင်တွေ့ရမယ့် သရုပ်ဆောင် မေတိုးခိုင်.. ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မေးတိုးခိုင်ကတော့ ယနေ့လေးမှာသူမရဲ့ဒရမ်အသစ်ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကို ကြေညာလာပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ အဓိကမင်းသမီးနေရာကနေ သရုပ်ဆောင်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ဇာတ်ကောင်စရိုက်လေးက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပြီး ပရိတ်သတ်တွေကို ဆွဲဆောင်မှု့ပေးနိုင်မှာ အသေချာပါပဲနော်။ သူမရဲ့ဇာတ်ကောင်အကျဉ်းလေးကို သိချင်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။ “ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရုပ်ခံရှိပေမယ့် ဖရိုဖရဲနေတတ်တဲ့ ကျင့်စရိုက်လေး‌တွေကြောင့် ကောင်လေးတွေရဲ့
တစ်ခေတ်တစ်ခါက လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့မင်းသမီးကြီးများရဲ့ ချောမောလှပတဲ့ ငယ်ရုပ်အလှများ…
တစ်ခေတ်တစ်ခါက လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့မင်းသမီးကြီးများရဲ့ ချောမောလှပတဲ့ ငယ်ရုပ်အလှများ… မြန်မာ့ရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာ တစ်ခေတ်တစ်ခါက အရမ်းကို လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ မင်းသမီးကြီးတွေ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အဖေတို့ခေတ်က တမ်းတမ်းစွဲ အားပေးခဲ့ကြရတဲ့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင် မင်းသမီးကြီးတွေဟာ အခုအချိန်မှာတော့ အသက်တွေကြီးပြီး ငယ်ရုပ်လေးတွေတောင် ပျောက်ကုန်ကြပါပြီ။ အဖေတို့ အမေတို့ ပြောလေ့ပြောထရှိတဲ့ စကားရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ “နင်တို့ခေတ်က မင်းသား
ချစ်မေမေရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ ငယ်စဉ်က ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်တဲ့ စံရတီမိုးမြင့်
အစ်မဖြစ်သူ ဖူးဖူးကို သဝန်တိုတာမို့ ယောကျာ်းမယူဘဲ တယောက်တည်းပဲနေစေချင်တယ်ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် အောင်မင်းခန့်…
လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၁)နှစ်ကျော်က အနုပညာလောကထဲဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ အမှတ်တရပုံလေးတွေကို ချပြလာခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် မေသက်ခိုင်
ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ပိုင်တံခွန်နဲ့အတူ ကြော်ငြာရိုက်ကူးနေတဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်တွေကို ပြသလာတဲ့ ပရဟိတမင်းသမီးလေး ခိုင်နှင်းဝေ…
လူမှုကွန်ယက်ပေါ်ကနေ လူကဲခတ်နည်းတစ်ခုကို ပရိသတ်တွေကို သင်ပေးလိုက်တဲ့ သည်ခေတ်နေ….
ရေကူးကန် နံဘေးမှာ ဗိုက်ကလေးကို ပွတ်ပြီး ကြည်နူးပီတိတွေဖြစ်နေတဲ့ မိခင်လောင်းလေး အိမ့်ချစ်…
© 2022 Celebrity Corner.